Noocee ah in la iibsado 2022? Hagaha si aad u doorato nooca aad u baahan tahay | War gadget
Sida loo iibsado Kindle
Qolka Ignatius | | Amazon, Akhristayaasha
In muddo ah hadda, buugaagta elektaroonigga ahi waxay noqdeen habka ugu isticmaalka badan ee lagu akhriyo buugaagta aannu ugu jecel nahay, hadday yihiin sheeko-curisyo ama fasallo kala duwan. Sababta ugu weyn waxaa u sabab ah raaxada ay na siiso labadaba markaan aqrino iyo markaan iibsaneyno.
Suuqa waxaan gacanta ku haynaa qalab aad u tiro badan oo lagu akhristo buugaagta elektarooniga ah, oo loo yaqaan akhristayaasha elektaroonigga ah, hase yeeshe, soo saaraha keena alaabada ugu wanaagsan suuqa sannad kasta waa Amazon, oo ah hormuudka adduunka buugaagta elektaroonigga ah. Haddii aadan hubin nooca ku habboon baahidaada, markaa waan ku tusi doonnaa sida loo iibsado Kindle.
Xilligan, noocyada Kindle waxay ka kooban yihiin afar qalab. Qeybtan kama fikireyno inta u dhaxeysa Dabka, kiniiniyada sidoo kale ka socda Amazon oo aan sidoo kale ku aqrin karno buugaagta elektarooniga ah, in kastoo taasi aysan aheyn ujeedkeeda ugu weyn, in kastoo Waxaan sidoo kale ka hadli doonaa iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta ay na siiso.
5 tabaha xiisaha leh si aad uga faa'iideysato Kindle-kaaga
Markii sanadihii la soo dhaafay, Amazon ayaa tagtay kordhinta tirada buugaagta elektaroonigga ah ee nala soo diyaariyey, oo hadda waxaan ka heli karnaa moodellada aasaasiga ah sida Kindle 2016 illaa Oasis Kindle, oo ah moodal ku raaxeysanaya teknolojiyaddii ugu dambeysay ee aaladda noocan ah.
2 Kindle (2016) 8 jiil
3 Paperle Kindle
4 Nooca Cagaarka
5 Isbarbardhiga Kindle e-akhristayaasha
6 In ka badan hal milyan oo buugaag ah oo aan ka hayno: Kindle Unlimited
7 Wax kasta oo kale dab u shid
El shid cusub, oo yimaadda suuqa si loogu beddelo jiilka 2016-aad ee 8, wuxuu isku daraa nalka hore ee la hagaajin karo, oo ah wax jiilkii ka horreeyay ka maqan yahay, taasina waxay noo oggolaanaysaa inaan aqrinno meesha iyo goorta aan dooneyno innagoo aan ku xirnayn iftiinka ku hareeraysan. Waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo shaashad taabasho sare oo is-khilaafsan aad ugu eg warqad daabacan oo la mid ah moodooyinka oo dhan ma muujiyaan wax milicsasho ah.
Shaashaddu waa 6 inji, waxay leedahay 4 GB oo keyd ah oo gudaha ah, cabirkeeduna yahay 160x113x8,7 mm iyo culeyskeedu waa 174 garaam, taasoo noo oggolaaneysa inaan hal gacan ku qabanno. Qiimaheedu waa 89,99 euro oo waliba waxaa laga heli karaa caddaan iyo madow labadaba.
Kindle (2016) 8 jiil
Kindle wuxuu na siiyaa a Shaashad 6-inji ah oo aan lahayn iftiin isku dhafan, sidaas darteed isha iftiinka waa lagama maarmaan in la isticmaalo. Shaashadda, sida aaladahaan badankood, kama daalin in la fiiriyo, waa taabasho mana muujineyso wax milicsi ah xitaa iftiinka qoraxda. Waxay kuxirantahay isticmaalka aan sameyno, batteriga wuxuu kusii socon karaa dhowr asbuuc hal mar oo lacag ah.
Moodalka Kindle (2016) waxaa lagu heli karaa midabyo madow iyo caddaan ah kaliya 69,99 euro, waana aaladda ugu fiican ee aad ka heli karto noocyadan si aad u gasho faa'iidooyinka ay buugaagta elektarooniga ahi na siinayaan, haddii aadan weli hubin inay noqon karto habkaaga cusub ee wax u cunista.
Soo iibso shidan (2016)
Kindle Paperwhite waa akhristayaasha ugu caansan uguna fudud Amazon. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay shaashad bixisa xallinta 300 pp iyo, sida moodooyinka oo dhan, kama tarjumayo il kasta oo iftiin leh. Booska keydinta ayaa sidoo kale la balaariyay marka loo eego jiilkii hore (8 iyo 32 GB) iyo iyadoo hal mar lagugu soo dalacayo waxaan leenahay ismaamul usbuucyo.
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ay na siiso marka la barbar dhigo moodelladii hore waa iska caabbinta biyaha, sidaas darteed innaguna si raaxo leh ugu isticmaal barkadda qubeyska, barkadda ama xeebta mahaddeeda IPX68. Shaashadu waxay na siineysaa laydh u gaar ah, oo ku habboon in loo isticmaalo xaalad kasta oo iftiin jawi ah.
Qiimaha Waraaqaha Kindle oo leh 8 GB oo keyd ah oo leh xiriir Wi-Fi ah waa 129,99 euro, halka nooca 32 GB uu gaarayo 159,99 euro. Waxaan sidoo kale haynaa nooca 32 GB oo leh 4G bilaash ah 229,99 euro.
El Nooca Cagaarka Ilaa hadda waa akhristaha e-akhriska ee Amazon oo leh cabirka shaashadda ugu weyn, 7 inji si gaar ah. Xalka shaashadu wuxuu gaarayaa 300 dpi kaas oo bixiya fiiqan xad dhaaf ah sidoo kalena kuu ogolaanaya muuji 30% ereyo ka badan isla bogga.
Sida Kindle Paperwhite, waa biyo la'aan mahad IPX68 ilaalinta, shaashadda ma muujineyso wax milicsi ah waxayna leedahay nalal u gaar ah oo awood u leh inay si buuxda wax ugu aqriso mugdiga adigoon indhahaaga daalin. Tani waa tusaalaha in wuxuu na siiyaa looxyada ugu yar, marka laga reebo dhinaca midig ee shaashadda, halkaas oo loox weyn ka muuqato inuu ku isticmaali karo hal gacan.
Qiimaha Kindle Oasis ee 8 GB ee keydinta leh xiriirka Wi-Fi waa 249,99 euro, halka nooca 32 GB uu gaarayo 279,99 euro. Waxaan sidoo kale haynaa nooca 32 GB oo leh 4G bilaash ah 339,99 euro.
Isbarbardhiga Kindle e-akhristayaasha
Tusaale Shidan cusub Paperle Kindle Nooca Cagaarka
Qiimaha Laga soo bilaabo EUR 89.99 Laga soo bilaabo EUR 129.99 Laga soo bilaabo EUR 249.99
Tamaño de la pantalla 6 "bilaa fikir 6 "bilaa fikir 7 "bilaa fikir
Awoodda 4 GB 8 ama 32 GB 8 ama 32 GB
Xallinta 167 dpi 300 dpi 300 dpi
Iftiinka hore 4 Laydh 5 Laydh 12 Laydh
Todobaadyo ismaamul Si Si Si
Naqshadeynta hore ee aan xadka lahayn Maya Si Si
IPX8 caabbinta biyaha Maya Si Si
Dareemayaal loogu talagalay hagaajinta iftiinka otomaatiga ah Maya Maya Si
Badhannada bogga Maya Maya Si
Isku xirnaanta Wifi Wifi Wifi ama wifi + isku xirnaanta moobilka bilaashka ah Wifi ama wifi + isku xirnaanta moobilka bilaashka ah
Peso Gram 174 Wifi: 182 garaam - wifi + 4G LTE: 191 garaam Wifi: 194 garaam; wifi + 3G: 194 garaam
Cabbirada X x 160 113 8.7 mm X x 167 116 8.2 mm 159 x 141 x 3.4 - 8.3 mm
In ka badan hal milyan oo buugaag ah oo aan ka hayno: Kindle Unlimited
Amazon waligeed laguma aqoon inay isku dayayso inay lacag ku sameyso qalabkeeda. Xaaladaha badankood, waxay ku iibisaa alaabteeda elektarooniga ah qiimo tan iyo markii ay rabto waa inay sii haysato isticmaalaha iyo in, kiiskan, toos uga iibso buugaagta madashaada.
Kindle Unlimited, wuxuu noo hayaa in ka badan hal milyan oo buugaag ah iyadoo lagu beddelayo lacag bil kasta ah 9,99 euro, buugaag aan awoodno. Intaa waxaa dheer, haddii aan nahay dadka isticmaala Ra'iisul-wasaaraha, waxaan gacanta ku haynaa buugga yare ee buugaagta, laakiin gebi ahaanba bilaash ah iyada oo loo marayo Prime Prime.
Wax kasta oo kale dab u shid
8 Fire Dabka shidan
Qoyska Kindle Fire wuxuu hada ka kooban yahay labo nooc oo 7-inch iyo 8-inji ah. Waxaa loogu talagalay inay ku cunaan waxyaabo badan oo warbaahin ah iyada oo loo marayo Amazon Prime Video, adeegga fiidiyowga ee Amazon, inkasta oo aan sidoo kale u isticmaali karno dhex gasho internetka, la tasho shabakadaha bulshada iyo dabcan si aad u aqriso buugaagta aan jecel nahay.
Faa'iidooyinka waa kuwo cadaalad ah, sidaa darteed kuma iibsan karno kiniinnada dhamaadka sare leh ee ay Samsung iyo Apple labadaba na siiyaan. Qiimaheeda nooca 7-inji waa 69,99 euro oo ah nooca 8 GB iyo 79,99 euro oo ah nooca 16 GB ah. Nooca leh cabirka shaashadda ugu weyn, nooca 8-inji ah, waxaa lagu qiimeeyaa 99,99 euro oo ah nooca 16 GB iyo 119,99 euro oo ah nooca 32 GB.
Iibso 7-inji Kiundle Fire Soo iibso 8-inch Kindle Fire HD
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Amazon » Sida loo iibsado Kindle
Dib u eegista nadiifiyaha faaruqinta ee Conga 3090
Amazon Kindle oo leh iftiin isku dhafan, waxay umuuqatay wax aan macquul aheyn in lagu hagaajiyo shidan [FALANQAYNTA]